Landa i-PROCREATE PAINT apk yakamuva kakhulu yi-Procreated Apps LLC yamadivayisi we-android | ApkDi.com
Landa manje ukuthola futhi udale umdwebo omuhle kakhulu nemidwebo
Yini iProperty Paint?
Ubuciko beProcreate Paint luhlelo lokudweba olungasindi olukhanyayo lwesimanje nohlelo lwama-comic oluza emabhulashi, amafonti, izikhungo ezenziwe ngaphambilini, nezimpahla ezahlukahlukene. I-Procreate Paint iyatholakala kwiWindows, Mac OS X, Android, naku-iOS. Uhlelo lusebenzisa ukulondolozwa kwamafu okuvumela amaklayenti ukuthutha ngokwanele umsebenzi wawo phakathi kwezigaba.
Abadwebi bamalayisense wokuguqulwa we-Android ukudweba noma iyiphi indawo abayidingayo ngenkathi bebamba ingqikithi yokuvezwa kwezinhlobo zomsebenzi wezinto.
Zoba ubuciko bokudweba okuhlobana nobubanzi bokusebenza kwamathuluzi wokuqamba kwabadwebi nabachwepheshe bencwadi yamahlaya. Ukuthinta kwalokhu kuhlanganisa amabhulashi ahlukahlukene, izikrini nezindawo zokusungula, amafonti amafu, kanye nama-contracion endalo wamahlaya. Ekugcineni, ukubhalisa kwisiza sokuthola mahhala kwenza amaklayenti afinyelele kumkhawulo onezikhundla ngakho angakwazi ukuqondisa ngokuqondile, ukusekela, nokunikela ngomsebenzi wabo.
Uhlelo lokusebenza lisekela ububanzi obuningi bezinhlangano ezifana ne-PNG, JPG, noma i-SVG veector.
Ungadweba into entsha ngaphandle kokuhlela noma uvule amarekhodi ambalwa bese udlala ngawo. Kuyinto engasebenziseka ngokuphelele kuwe noma ngumndeni onabantu abasha ukuze udlale umbhangqwana. Ngokucabanga konke, wonke umuntu unombono wenkosi ngokwakhe.
Ngeke uthole noma yimaphi amadivayisi angadingekile noma acatshangelwe, amabhulashi, amafonti, iziteshi lapha, kufanele kusetshenziswe ukuthola okuhlangenwe nakho okuhle.
Ubuciko bokudweba bokuzalwa buhlelo lokusebenza lokukholisa lamahhala layo yonke iminyaka ku-Android. Qala ukudweba, ukufaka phakathi, ukuveza, noma ukufihla kuleli phuzu! ungazazisa izithombe zezilwane, izimbotshana, izithelo, imifino, izimoto, futhi lokho kuyinto nje etholakalayo yento enkulu.
Ngokudalwa kokuzala, awudingi ukuhlala uzungeze nge-wifi ukuqala isipiliyoni sokufihla. Zama onqobayo phakathi kwezinye izinhlelo zokusebenza zamahhala!
Ukufihla nokudweba kubonakala kusiza abadala ngokuletha isisindo futhi bazizwe bethonywe. Inqubo engakaze ibonwe ngaphambili yokuvula ingqondo yakho futhi ube nemicimbi ethile emangalisayo. Ukufanele ukufihla ukwelashwa mahhala ngalesi sikhathi!
• Injini yokuvuselela i-Vector, ukusondeza okungalahleki
• Kopisha futhi unamathisele
• Ukudluliswa kwe-PDF
• I-JPG ne-PNG idlulisa
• Ukungenisa isithombe
Thumela ngenhliziyo yonke ku-Evernote
• Ubungakanani bephepha elingapheli noma ubukhulu bephepha elithile
• Cindezela iminwe emibili ukusondeza noma ukuthuthukisa ukuthuthukiswa kwecanvas
• Sebenzisa izingqimba njengasezinhlelweni zokucabanga ezinengqondo
• Ukulawulwa kwamaphuzu we-Vector
• Hlunga imizamo yakho ngamagama anjengokuthi "umsebenzi", "ubuciko, njalonjalo."
isigaba: Free Art & design App
usuku lokushicilela: September 09, 2020
inguqulo yakamuva: 2.0